प्राधिकरणका सुपरभाइजर घुससहित पक्राउ परेपछि » खबरहरुको एउटै केन्द्र
प्राधिकरणका सुपरभाइजर घुससहित पक्राउ परेपछि
मंगलवार, असार २०, २०७४ १२:४५ मा प्रकाशित !
भक्तपुर, असार २० गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भक्तपुर शाखाका सुपरभाइजर भगवान सागर भैललाई घुस लिइरहेको अवस्थामा रङ्गे हात पक्राउ गरेको छ । आयोगको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले भैललाई रु ११ हजार घुस लिइरहेको अवस्थामा उनकै कार्यकक्षबाट सोमबार रङ्गेहात पक्राउ गरेको हो । एक ग्राहकसँग मिटरको क्षमता वृद्धि गर्न भैलले घुस मागेको भन्ने उजुरीका आधारमा आयोगको टोलीले अनुसन्धानका क्रममा भैललाई रङ्गेहात पक्राउ गरेको हो ।
PREVIOUS POST Previous post: लोकतान्त्रिक फोरम सम्मरीमाईमा विजयी
NEXT POST Next post: जबर्जस्ती करणी गर्ने एकजना पक्राउ
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते मंगलवार, असार २०, २०७४ १२:४५
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस मंगलवार, असार २०, २०७४ १२:४५
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण मंगलवार, असार २०, २०७४ १२:४५
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी मंगलवार, असार २०, २०७४ १२:४५
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? मंगलवार, असार २०, २०७४ १२:४५